I-Bird's Nest @ Elizabeth Beach Pacific Palms
Indawo ekahle yokufihla ikhanda yabantu abangu-2. Indawo yangasese esanda kwakhiwa, eyingqayizivele enikezela ngokukhululeka, ukuphila kwesimanje ngenhla kwe-Wallis Lake. Sitholakala endaweni ethule ye-de-sac, nje uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eklabhu edumile ye-"Recky" kanye nokushayela imizuzu emi-2 ukuya e-Elizabeth naseShelly Beaches. Isitudiyo sethu esizimele esizimele sihlukanisiwe nendlu enkulu, enomnyango ohlukile.
Ukushayela imizuzu emi-2 ukuya e-Elizabeth naseShelly Beaches, kanye nemizuzu emi-5 ukuya phansi komgwaqo kukuletha eBoomerang naseBluey's Beaches, izitolo nezindawo zokudlela. Usilingi ovalekile udala umuzwa ohelezayo, ovulekile. Umbhede olingana nendlovukazi ubekwe ngaphansi kwendawo yokugcina izinto, kunendawo yokuphumula enethezekile enomabonakude omkhulu, nendawo yokugezela yesimanje. Ivulandi elincane elizimele phambi kwestudiyo lishuthukwe ezingadini zomdabu futhi linetafula nezihlalo ezine-Baby Webber Q. Kunendawo yokupaka eyimfihlo yemoto eyodwa. Sicela uqaphele ukuthi i-studio ihloselwe ukuhlala okufushane, ngakho-ke izindawo zokupheka zilinganiselwe, noma kunjalo, ikhishi lifakwe konke okudingayo ukuze udale ukudla okulula, okulula, okulungele ukuphikisana okuncane ngenkathi useholidini. Kukhona indawo yokupheka yokungenisa eyodwa, i-microwave, umshini wesandwich, isiqandisi/ifriji, usinki, umshini wekhofi we-pod kanye ne-BBQ yakho etholakala kalula egcekeni elixhumene nayo.
Futhi sihlinzeka nge-inthanethi ye-Wi-Fi yamahhala kanye ne-Smart TV ekwazi ukufinyelela i-Netflix.
Sikunikeza izinsiza zakho eziyisisekelo ezihlanganisa yonke ilineni (njengamashidi, okokulala, amathawula etiye, amathawula okugeza namathawula olwandle), iphepha lasendlini yangasese, insipho, ukugeza umzimba, ishampoo/i-conditioner, isomisi sezinwele. Ikhishi ligcwele itiye, i-coffe pods, ushukela nezinye izinto eziyisisekelo eziyisisekelo. Ukuze uthole ukudla kwasekuseni okulula okulula sihlinzeka ngokusanhlamvu, isinkwa, ibhotela nojamu, izithelo ezintsha, neyogathi. Sicela usazise okuncamelayo ubisi lapho ubhukha.
Samukele isimiso sokuhlanza esinconyiwe se-Airbnb, futhi silandela noma yiziphi iziqondiso nemithetho ekhishwa uhulumeni wesifunda. Uma ucabanga ukuthi awuphilile, noma usanda kuxhumana nabantu abangaphilile kahle, sicela uphinde ucabangele ukuvakasha kwakho futhi usithinte ukuze uthole izinketho zokuphinde zokubhukha.
Kukhona iFoodworks entsha, imizuzu emi-5 phezulu eLakes Way osendleleni eya e-Elizabeth Beach enakho konke okudingayo ngamanani aphusile. Kuyisitolo segrosa esisebenza ngokugcwele. Isitolo esijwayelekile sikaBluey siphezulu nje komgwaqo ku-Boomerang Drive, sihlinzeka ngezinto ezibalulekile zokuphila.
Asinazo izindawo zokuwasha ezitholakalayo kodwa uma uhlela ukuhlala isikhathi eside (ngaphezu kobusuku obu-5), noma esimweni esiphuthumayo singakusiza ngokuwasha noma sikunikeze izinketho ezithile.
4.97 ·65 okushiwo abanye
4.97 · 65 okushiwo abanye
I-Elizabeth Beach isendaweni yasePacific Palms edume ngamabhishi ayo ahlanzekile, umoya okhululekile kanye nokuntweza okusezingeni lomhlaba. Kunezindledlana ezinhle zasehlathini zokuhamba nezokuhamba ngebhayisikili phakathi kwehlathi lemvula, noma zama i-kayaking bese usukuma ugibela ukugibela ngohlelo lwe-Myall Lakes. I-Wallis Lake yaziwa njengenye yezindawo ezihlanzekile kakhulu zokubamba izinhlobonhlobo zezinhlanzi nenkalankala, ihlinzeka ngezindawo zokudlela eziningi eziphezulu zase-Sydney.
I-Bluey's Beach inamakhefi amaningana akhululekile nezindawo zokudlela ezinikeza amakhofi amnandi, amabhulakifesi, okuthengayo kanye nedina lesizini. Futhi kule ndawo, iLake lakwaSmith elaziwa ngokudoba namakhefi- Isitolo Sokudla Okuhle kanye ne-Frothy Coffee, i-Seal Rocks enamabhishi ayo amahle kanye ne-snorkeling, kanye ne-Treachery Beach ukuze uthole ukuntweza okwengeziwe.
Ukuhamba nje imizuzu engama-20 ukuya eForster, eWoolworth's, eColes, e-Aldi, e-Kmart nakwezinye izitolo zezitolo kuseStockland's Shopping Center. IDowntown Forster inezindawo zokudlela eziningi, izitolo namakhefi. Aziwa ngamanye ama-oyster amahle kakhulu emhlabeni, futhi amahlengethwa avame ukujabula ukubeka umbukiso wokushona kwelanga ngaphansi kwebhuloho. Siyajabula ukuhlinzeka ngezincomo zendawo yokudlela.
Sizohlangana nawe lapho ufika ukuze sikuvumele ungene endaweni. Uzonikezwa ukhiye lapho ufika, esidinga ukubuyiswa lapho uhamba. Sihlala kwenye indlu kule ndawo, futhi siyakujabulela ukusiza noma ukunikeza iziphakamiso zendawo uma usidinga ngesikhathi sokuhlala kwakho. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho, futhi ngaphandle uma ufuna ukuxhumana nathi, ngeke sikuhluphe.
Sizohlangana nawe lapho ufika ukuze sikuvumele ungene endaweni. Uzonikezwa ukhiye lapho ufika, esidinga ukubuyiswa lapho uhamba. Sihlala kwenye indlu kule ndawo, futhi siyakujabule…